Vaovao - Fampidirana fototra momba ny tanjaka fanamafisana
Fampidirana fototra momba ny trano fijanonana
Ny tilikambo fihenam-bidy dia mpamadika hafanana, ao anatiny ny hafanana dia esorina amin'ny rano amin'ny alàlan'ny fifandraisana eo anelanelan'ny rano sy ny rivotra. Ny tilikambo fanamafisana dia mampiasa fitrandrahana rano mba handavana ny hafanana amin'ny fizotrany toy ny fanamafisana ny rano mikoriana ampiasaina amin'ny fanadiovana solika, zavamaniry simika, zavamaniry herinaratra, famokarana vy ary zavamaniry fanodinana sakafo.
Ny tilikambo fanamafisam-peo amin'ny indostria dia mamoaka hafanana mankany amin'ny habakabaka na dia ny fihenan'ny rano aza dia mankany amin'ny maripana ambany. Ireo tilikambo izay mampiasa an'io fizotrany io dia antsoina hoe tilikambo fanamafisana. Ny fanaparitahana ny hafanana dia azo tanterahina amin'ny alàlan'ny rivotra na ny etona amin'ny rano. Ny fivezivezena amin'ny rivotra voajanahary na ny fivezivezena amin'ny rivotra an-tery dia ampiasaina mba hitazomana ny fahombiazan'ny fiasan'ny tilikambo sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny fizotrany.
Ny fizotrany dia nantsoina hoe "evaporative" satria mamela ny ampahany kely amin'ny rano hampangatsiaka azy mba hipoitra ho any amin'ny onjampeo mihetsika, manome fihenam-bidy lehibe amin'ny sisa amin'io renirano rano io. Ny hafanana avy amin'ny rano mikoriana mankany amin'ny renirano dia mampiakatra ny hafanan'ny rivotra sy ny hamandoany hatrany amin'ny 100%, ary ity rivotra ity dia avoaka amin'ny atmosfera.
Ireo fitaovana fandavana hafanana miiba - toy ny rafi-pitabatabana indostrialy - dia matetika ampiasaina mba hanomezana maripana ambany kokoa ny rano noho izay azo tratrarina amin'ny fitaovana fandavana hafanana "anidina" na "maina", toy ny radiator ao anaty fiara, amin'izay mahomby sy mahomby kokoa fampandehanana angovo mahomby amin'ny angovo.
Ny tilikambo fanamafisana rano amin'ny indostria dia miovaova arakaraka ny tariby kely ambony tafo ka hatramin'ny tranobe hyperboloid (hyperbolic) tena lehibe izay mety hahatratra 200 metatra ny halavany ary 100 metatra ny savaivony, na ireo rafitra mahitsizoro mety ho 15 metatra ny halavany ary 40 metatra ny halavany. Ireo tilikambo kely (fonosana na modular) dia fananganana orinasa matetika, fa ny lehibe kokoa kosa dia eo an-toerana no amboarina amin'ny fitaovana isan-karazany.